Blogger of this week: Aasma Aryal - MeroReport
Blogger of this week: Aasma Aryal
लाजिम्पाटमा बसोबास गर्ने आस्मा अर्याल काठमाडौं विश्वबिद्यालयको सम्बधन प्राप्त काठमाडौं कलेज अफ म्यानेज्मेन्टबाट बि बि ए गर्दै छिन । उनको परिवारमा बुवा, आमा, भाइ र उनी समेत गरेर चार जना रहेका छन । उनी कबिता लेख्नको साथसाथै समाजमा घटेका चित्त नबुझेका कुराहरुको बारेमा ब्लगिङ गर्न रुचाँउछिन । अहिलेको प्रविधिको युगमा धेरै युवाहरुले ब्लगिङ गर्नुपर्ने र इन्टर्नेटको प्रयोग गर्नु पर्ने धारणा राख्ने आस्मा यो साताको ब्लगर बन्न सफल भएकी छिन :
सर्वप्रथम मेरोरिपोर्टको साताको ब्लगर बन्नु भएकोमा यहाँलाई बधाइ ।
साताको ब्लगर हुनुभएकोमा यहाँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ?
मलाई एकदमै खुशी लागेको छ ।
नागरिक पत्रकारिताको प्रवर्धन गर्न सुरु भएको मेरोरिपोर्टको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीको जमानामा सबै इन्टरनेटबाटै हुन्छ अनि खबरहरु पनि इन्टरनेटबाटै पढ्न पाइन्छ । कहिलेकाँही फिल्ड भिसिटहरुमा जान पर्‍यो भने पनि अनलाईनमा हेर्‍यो पत्रिका नचाहिने जस्तो भइसक्यो । मलाई त यहाँहरुले यस्तो न्युजहरु पोस्ट गर्नु भएको अनि ब्लगरहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु भएको एकदमै खुशी लाग्यो । सबैले ठुलठुला पत्रिकाबाट आफ्नो भाव पोख्न पाँउदैनन अनि यो ईन्टरनेटले एकदमै सजिलो बनाँउछ । झन यहाँहरुले ब्लगरहरुलाई प्रवर्द्दन गरेर यस्तो साईट चलाउनुभएको छ यो एकदम नै राम्रो काम गर्नु भएको छ ।
अब एकैछिन ब्लग र ब्लगिङको कुरा गरौ । तपाईं ब्लगिङतर्फ कसरी आकर्षित हुनुभयो ?
मलाई सन्चो नभएर आराम गर्नु परेको थियो । कबिता रच्ने कुरा मनमा आयो र यत्तिकै सेभ गरेर राखेको थिएँ । अनि मैले ट्विटरबाट नेपाली साथीभाइ भेटेपछि वहाँहरुले मलाई ब्लगिङको बारेमा बताउनुभयो र ब्लग खोल्न प्रोत्साहन गर्नुभयो । २००८ - २००९ तिर देखी मैले ब्लग लेख्न थालेको हुँ । त्यतिबेला ब्लग लेख्ने थोरै नेपालीहरु देख्थेँ । मैले बिस्तारै पोस्ट गर्न थालेँ र नयाँ-नयाँ ब्लगहरु पढ्दै जान थालेँ ।
ब्लगिङ नै किन रोज्नु भयो ?
नयाँ प्रबिधिको जमानामा ब्लगिङ नै उत्तम माध्यम सोचेँ ।
के तपाईंको ब्लगले तपाईंलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ? गर्छ भने कसरी ?
अवश्य गर्छ । म जे हुँ म जे छु , सबै त्यस्तै शब्दहरुमा पोखिएका छन ।
के कस्तो बिषयवस्तुमा ब्लगिङ गर्नु हुन्छ ?
मेरो ब्लग मैले लेखेका कबिताका पंक्तीहरुले भरिएका छन । अनि एक दुइ वटा समाजमा घटेका चित्त नबुझ्ने कुराहरुको बारेमा छ । त्यस्तै गरी आफुलाई मन परेको भनाइहरु पनि पोस्ट गर्ने गरेको छु ।
कहिले हप्ता मा २-३ वटा पनि पोस्ट गर्छु । कहिले एउटा नि गर्दिन । केहि फुर्यो अनि केहि भयो भने पोस्ट गर्छु ।
पछील्लो पटक कुन बिषयमा के लेख्नुभयो ?
पछील्लो पटक मैले हाम्रो समाजको बारेमा लेखेको थिएँ । कसरी मानिसहरु पावर पाएपछि त्यसको दुरुपयोग गर्छन्, निमुखा माथि अत्याचार गर्छन तर समाजमा कोही पनि उनीहरु बिरुद्द बोल्ने आँट गर्दैन ।
जब म केहि कुराको बारेमा गहिरिएर सोच्छु मलाई त्यसैले लेख्न अभिप्रेरित गर्छ । धेरै जस्तो मेरो ब्लग पोस्टहरु चाँही "हरेक रात पछी बिहानी आँउछ" भन्ने भाव दिने खालका छन ।
ब्लगमा पाठकहरुबाट कस्तो प्रतिकिया पाईरहनु भएको छ ?
अहिलेसम्म त राम्रो प्रतिकिया पाइरहेकी छु । तर मलाई हामी नेपालीको एउटा कुरा चित्त बुझ्दैन, राम्रोलाई पो राम्रो भन्नुपर्छ त नराम्रोलाई नि राम्रो भन्नु भएन नि, कहिलेकाँही बिग्रिन्छ नि लेखाइ । के कहाँ चित्त बुझेन भनेर नि लेख्नुपर्छ नत्र लेखाइ कसरी सुधार्ने ? म पोजिटिभ किटिसिज्ममा बिश्वास राख्छु । यसमा यो मिलेन वा त्यसै कुरालाई राम्रोसँग प्रस्तुत गरेर यसो भइदिएको भए अझ राम्रो हुने थियो भन्नु पर्छ । हाम्रो बानी चाँही अरुलाई फुलाउन ओहो कत्ती राम्रो भनिदिन्छौँ । त्यो चांही ठीक होईन । लेखाइलाई राम्रो बनाउन सही प्रतिकियाको आवश्यकता पर्दछ ।
तपाईंलाई के लाग्छ ब्लगिङले समाजमा केही प्रभाव पार्न सक्छ ? सक्छ भने कसरी ? त्यस्तो कुनै उदाहरण छन ?
यस्तो टेक्नोलोजी प्रभाव भएको बेला छ यति बेला नै हो ब्लगबाट केही गर्ने, म त भन्छु अझै धेरै यूवाहरुले ब्लगिङ गर्नुपर्छ । सबैले सबैको कुरा सुन्नु पर्छ । ब्लगिङ्गले नै त नभनुम तर ईन्टरनेटका श्रोतहरुले गर्दा धेरै राम्रा-राम्रा कामहरु भईरहेका छन् । जस्तै विदेशमा बसेका नेपालीहरु मिलेर यता एन जि ओ खोल्ने गरेको पाईन्छ, सबै इन्टरनेट कै भरमा । ईन्टरनेटको माध्यमबाट भएका यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
ब्लगिङ गर्दा त्यस्तो कुनै रमाइलो वा सम्झनलायक अनुभव छन ?
ब्लगिङ् गर्दाको सबैभन्दा रमाइलो कसैले मेरो ब्लग पढ्छ भनेको सुन्दा नै हुन्छ । मेरो भाइले मलाई सुनाउदै थियो, उसको एउटा साथीले मेरो ब्लगको बारेमा प्रशंसा गर्दै कुरा गरिरहेको थियो अनि मेरो भाईले मेरो दिदी हो नि भन्दा छक्क पर्‍यो रे । एकदमै राम्रो लेख्ने भन्दै थियो रे, हा हा हा । मलाई त एकदमै अचम्म लाग्छ त्यस्तो मेरो लेख पनि पढ्छन भनेको सुन्दा त । आफु्ले लेखेको कबिता कसैले पढ्यो भन्दा त्यो जस्तो खुशी केही लाग्दैन झन कसैले मनपर्‍यो भनेको सुन्दा त झनै खुशी लाग्छ ।
त्यो त राम्रो हो नि । मानिसहरु स्वतन्त्र भएर आफ्ना कुराहरु ब्लगद्धारा अभिव्यक्ति गरिरहेका छन् । यस्तो हुनुपर्छ, नेपालमा अलि ढिलै शुरु भए नि राम्रो भईरहेको छ । सबैले आफुले चाहेको कुरा बोल्ने अधिकार पाउनुपर्छ ।
तपाइलाइ के लाग्छ, ब्लगिङमा आचारसंहिताको जरुरी छ?
जुनसुकै बिषयमा पनि अनुशासन आवश्यक पर्ने भएकोले ब्लगिङ्गको लागि पनि आचारसंहिताको आवश्यकता देख्छु म ।
मेरोरिपोर्टले ब्लगर र ब्लगिङलाई प्रवर्धन गर्न गरेको प्रयासलाई के भन्नु हुन्छ ?
एकदमै राम्रो गरिरहनु भएको छ यहाहरुले । मलाई एकदमै खुशी लाग्यो, मानिसहरु विदेशमा मात्र लेख्नमा प्रोत्साहन दिन्थे जस्तो लाग्थ्यो अब नेपालमा पनि यस्तो हुनथाल्यो भने त हाम्रो देशलाई पनि ब्लगरहरुलाई प्रोत्साहन दिने देशको सुचिमा राख्न सकिन्छ । यो त हाम्रो देशको ईन्टरनेट सम्बन्धि विकासको लागि ठुलो त कदम हो । अब चाँहि राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको छ ।
आस्माको ब्लग लिन्क : http://www.azm123.blogspot.com/
Comment by Shaku Limbu on April 27, 2012 at 5:20am
congratulations to you, I'm your blog and twitter follower. :)
Comment by Yam Bahadur Dura on April 11, 2012 at 10:07am
So encouraging remarks!
Comment by Indra Dhoj Kshetri on April 5, 2012 at 8:57pm
Congratulations Ashmaji. MeroReport team feels proud to recognize the contribution like yours in the field of blogging. Keep rocking.
Comment by Ashma Aryal on April 5, 2012 at 7:34pm
Comment by Ajeeta Sigdel on April 4, 2012 at 4:15pm